158/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, न्याय, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा72078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
159/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानून, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा32078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
160/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 13 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
161/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 36 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
162/078-79 लेखा अधिकृत, प्रशासन, लेखा, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 36 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
163/078-79 शाखा अधिकृत वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 8 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00
164/078-79 लेखापरीक्षण अधिकारी, लेखापरीक्षण, रा.प. तृतीय पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा 11 2078-10-04 2022-01-04 17:54:09 0000-00-00